चाडपर्वमा हिंसा रोक्न घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्दै छौं – प्रनाउ कार्की |
प्रकाशित मिति :2017-09-27 21:17:14
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले मदिरा नियन्त्रणको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, विभिन्न आपराधिक घटनाको मुख्य कारक घरेलु मदिरा हुने गरेकोले पनि घरेलु मदिरा नियन्त्रणलाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाईएको प्रहरीले जनाएको छ । यसै सेरोफेरोमा महिला खबर संवाददाता सर्मिला बुढाथोकीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीसँग गरेको कुराकानी :-
– दशैंमा मदिराको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न प्रहरीको के योजना छ ?
मदिराकै कारण विभिन्न आपराधिक घटनामा बृद्धि भएको साँचो हो । महिला हिंसा, घरेलु हिंसा जस्ता गतिविधिहरु बढेको र कानून अनुसार अवैधानिक समेत भएकोले हामीले दोलखा जिल्लालाई घरेलु मदिरा मुक्त जिल्ला बनाउने विशेष अभियान चलाई रहेका छौ । दशै तिहार जस्ता चाडवाडमा यसको प्रयोग अस्वभाविक हुने भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विशेष टोलि बनाएर होटलहरु सर्च गर्ने, शंकास्पद ठाँउमा खानतलासी गर्ने जस्ता कामहरु भइरहेका छन् । साथै सिल प्याक मदिराहरु पनि कानुनी रुपमा अनुमति लिएर बिक्री वितरण भएको छ की छैन भन्ने पनि अनुगमन भै रहेको छ ।
– घरेलु मदिराका कारण कस्ता कस्ता घट्नालाई बल पुगेको पाउनु भएको छ ?
– दोलखा प्रहरीमा दर्ता भएका आपराधिक घट्नाहरुमा बढी कस्ता खालका घट्नाहरु छन् ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका आपराधिक घटनाहरुमा जर्वजस्ती करणी, जर्वजस्ती करणी उद्योग, अनुसूचि १ अनुसारको विभिन्न फौजदारी प्रकृतिका आपराधिक घटनाहरु बढी पाईएको छ ।
– विशेषगरी महिला पीडित भएका अपराधिक घट्नाहरु मिलापत्रमा टुङ्गिने भएकोले पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भन्ने गरीन्छ नी ?
दोलखा प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै पनि अपराधिक घट्नामा मिलापत्र गराएको छैन् । र दोलखा प्रहरीले मुद्धा चलाएका घट्नाहरुमा आरोपी साधारण तारेखमा छुटेको रेकर्ड पनि छैन । तर कुनै कुनै बेला श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा आउँदा दुबैको सहमतिमा मिलेर जाने गरेको केही उदाहरण भने छन् ।
– दोलखा जिल्लामा आत्महत्याका घट्नाहरु पनि निक्कै हुने गरेको तपाईंहरुकै तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसको कारण के पाउनु भएको छ ?
अन्य जिल्लाको तुलनामा दोलखा जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको संख्या निक्कै बढी छ । आत्महत्या गर्नेमा महिलाहरु नै बढी पाईएको छ । उमेरको हिसाबले हेर्दा सबै उमेर समूहको पाईन्छ । आत्महत्या गर्नुको तथ्यगत कारण त पाउन मुश्किल छ किनभने मर्नेले त्यस्तो केहि खुलाएर गएको हुँदैन तर सामान्यत घरायसी विवादकै कारण आत्महत्या गरेको धेरै पाईन्छ ।
– दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा जुवा तासको चर्चा पनि निक्कै हुने गर्छ । दोलखामा जुवातास नियन्त्रणको प्रयास कस्तो छ ?
जुवा तासका कारण धेरैको परिवार भाडिएको छ । घरेलु हिंसाको कारण पनि जुवा तास हुने गरेको छ । यो गैर कानुनी पनि छ त्यसैले हामीले यसको नियन्त्रणको लागि अभियान चलाएका छौ । चाडपर्व वा अन्य कुनै वहानामा जुवा तासले छुट पाउन सक्दैन । कसैले जुवातास खेलेको पाईएमा मुद्धा चलाएर कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँछौ ।